Mesotherapy Solution Vagadziri & Vatengesi - China Mesotherapy Solution Fekitori
BEULINES Mesotherapy Anti-Melano Solution Serum Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zveBEULINES Anti-Melano Mesotherapy solution, ine simba uye yakapfuma anti-oxidant mubatanidzwa, inokurudzirwa zvakanyanya kudzikisira matambudziko eganda senge hyperpigmentation uye zera mavara, melasma, nzvimbo dzine rima. Iyo inodzivirira photo-kukwegura, inovandudza acne mavanga uye inopa ganda kutaridzika kwevechidiki. Chinhu chikuru: Aqua (Mvura), Tranexamic Acid, Nicotinamide Mononucleotide, Acetyl Glucosamine, Ascorbic Acid, Phenoxyethanol, ...
Chii chinonzi BEULINES mesotherapy whitening solution? BEULINES Ganda kuchenesa mesotherapy mhinduro shandisa iyo ganda rinojekesa mumiririri inozivikanwa se "Glutathione". Chinangwa chekushandisa glutathione kushandura eumelanin kuita pheomelanin, iyo inowanzo kuwanikwa muvanhu vane ganda rakanaka. Glutathione inobatsirawo mukumisa kugadzirwa kwema enzymes anozivikanwa se tyrosinase iyo inotorawo chikamu mukugadzirwa kwemelanin mumuviri wako izvo zvisina kunaka kune hutano hweganda rako. Mune mamwe mazwi, Glutathione Injecti ...
Chii BEULINES Mesotherapy Kukura Kwemvere Solution?
BEULINES Mesotherapy Bvudzi Kukura Mhinduro inzira inoipisisa yekuzora, uye inozivikanwa senzira yazvino yekuvandudza bvudzi. Mesotherapy kurapwa ine zvinyoro nyoro kuchenesa ganda romusoro, kozoti micro jekiseni madosi madiki emishonga inodiwa pazasi peganda. Zvinhu zvekukura zvinokonzeresa maseru metabolism, kumhanyisa kumutsidzira kwemvere dzebvudzi uye kumutsidzira kukura kwebvudzi. Izvo zvakawanikwa zvichibatsira mune yakawanda yevarwere vanotambura nehombe bvudzi kudonha.
Chii chinonzi BEULINES Mesotherapy Anti-kuchembera Solution? BEULINES Anti kuchembera Mesotherapy marapirwo anosanganisira kujekesa Hyaluronic Acid yakanangana nepakati peganda rinodaidzwa kuti mesoderm nesirinji, micro tsono, meso pfuti Izvi zvinopa simba nekumutsiridza ganda nekusimudzira kugadzirwa kwe collagen uye elastin uye kunosimudzira metabolism yako yeganda. BEULINES Mesotherapy maitiro anoshanda anoumba zvemukati kunze, mukuvandudza chitarisiko uye mhando yeganda. Main Ingreient: Aq ...
Chii chinonzi BEULINES Mesotherapy Fat Deredza Solution? BEULINES Mesotherapy Fat Reduce Solution mushonga unoshanda, usiri wekuvhiya unoshandiswa kugadzirisa cellulite.Iyo inonzi mesotherapy nekuti musanganiswa wemafuta-anopedza enzyme unogoverwa mu mesoderma kureva mafuta uye nyama inobatanidza iri pasi peganda. Cellulite mesotherapy inzira inoshanda, inobudirira inoshandiswa kubvisa yakawandisa cellulite kubva paganda pamusoro.Makemikari makuru e cellulite mesotherapy ndeye Carnitine ...